Tsidiho Odisha Tour
Toerana fizahan-tany lehibe any Orissa - fizahan-tany any Orissa
Manana kitapom-pikarakarana ahitana ivon-toeram-pitsangatsanganana an'i India isika, toy ny Moyen-Orient, Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, ary Bengal Andrefana. Tahaka ny The Odisha Textile Tour miaraka amin'ny Golden Triangle dia manatsara ny traikefa an-tsokosoko Ao Nuapatna sy Maniabandh, nalaza ho Ekat. Io, ankoatra ireo, ireo tanàna miavaka toy ny Badamba, Sambalpuri, Sagarpalli ary ButtuPalli, Chikiti sy Padmanavpur dia nasongadina koa ho toerana fitsangatsanganana Orissa ho an'ny fialamboly vahiny sy vahiny mpizaha tany.
Nahazo fiderana avy any amin'ny toerana samihafa izahay tamin'ny fandaminana fitsidihana manokana ny Golden Triangle an'ny Odisha, viz, Bhubaneswar, Puri, Konark; Ecotour mankany Bhitarkanika sy Chilka; Tranom-Buddhist Sites, Tours any an-Tempoly, Pakistana ambanivohitra, Tafika Fitsangatsanganana, Package ara-panahy, Tour Packages amin'ny herinandro, RathaYatra Special package, ary ny fanentanana an-tsokosoko an'i Kolkata-Gangasagar-Sundarbans. Ny tranom-bahiny sy trano fisakafoan'i Sand Pebbles no nanangana ny Toeram-ponenana Jungle sy Crocodile ao amin'ny toeram-ponenan'ny ecotourism Bhitarkanika - dia famelabelaran-kevitra ho an'ny mpizaha tany. Tsy hiverina intsony mihitsy i Orissa!
Ireto ny toerana manan-tantara ao Orissa mba hijery.
Ny fitsidihan'i Buddhistan'i Uttar Pradesh
Little Lahsa - Tempolin'entana - Vaishno Devi
Andramo ny Andaman Trip
Mandeha mankany Odisha